प्रचण्डको सपना चकनाचुर हुनेगरी प्रधानमन्त्री ओली एक्सनमा, जसपामा छायो खुसीयाली ! - Rising Dainik
April 6, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on प्रचण्डको सपना चकनाचुर हुनेगरी प्रधानमन्त्री ओली एक्सनमा, जसपामा छायो खुसीयाली !
काठमाडौँ / जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले उठाएका माग पूरा गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएका मु’द्दा फिर्ता लिन र ब’न्दी ‘रि’हाइ गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
जसपाका अनुसार सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएकाको मु’द्दा कहिले र कहाँ दर्ता भएको हो र हाल ती मुद्दाको अवस्था कस्तो छ भन्ने यकिन विवरण निकाल्न फाराम भर्न लगाएको छ। फाराम भर्न लगाउनुको अर्थ आफ्नो पार्टीद्वारा अघि सारिएका माग पूरा हुने परिस्थिति सिर्जना हुन लागेको जसपा नेता एवं कार्यदल सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
ज’सपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले ब’न्दी ‘रिहाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ। कार्यविधि पास भएसँगै जसपालाई मु’द्दा र ब’न्दीको विवरण निकाल्न फाराम भर्न लगाइएको हो। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। जसपाले उठाएका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री र ठाकुरबीच कुराकानी भएको ठाकुरनिकट जसपाका नेता डा। सुरेन्द्र झाले बताए।
जसपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रि’हाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ। कार्यविधि पास भएसँगै जसपालाई मु’द्दा र ब’न्दीको विवरण निकाल्न फाराम भर्न लगाइएको हो। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो।
जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य मनीष सुमनका अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा जसपाका कार्यकर्तामाथि ८६ थान मु’द्दा लगाइएका छन्। तिनमा २ सय ८२ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। जसपाका ५० जना कार्यकर्ता अहिले पनि विभिन्न जेलमा रहेको सुमनले जनाए। सुमनका अनुसार सबैभन्दा बढी मु’द्दा टीकापुर घ’टनामा दर्ता गरिएका छन्। सो घ’टनामा ब’न्दी बनाइएका जसपाका सांसद रेशम चौधरीको रि’हाइको मु’द्दालाई जसपाले प्रमुख अजेन्डा बनाएको छ।
यसैगरी जसपाले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झु’टा मु’द्दा खारेज हुनुपर्ने, ब’न्दीहरूको रि’हाइ हुनुपर्ने, घा’इतेहरूको उपचार हुनुपर्ने, संविधान संशोधन हुनुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरकारले तत्काल पूरा गर्न सक्छ तर मु’द्दा खा’रेजका लागि भने अदालती प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ। पछिल्लो समय जसपाका अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकिएका छन्।
गच्छदारलाइ प्रहरीले प’क्राउ गर्दै
काठमाडौं उपत्यकामा थपिएको नि’षेधाज्ञा आजबाट लागू, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?
May 13, 2021 May 13, 2021 Ramash Kunwar
बिबाह गरेको १२ घण्टा नबित्दै दुलहीको रहस्यमय मृ’त्युबारे सासु र नन्दले…